DZIDZO DZAKO DZINOGADZIRA CHIBvumirano
Kana iwe ukabaya pane mabhatani, iwe unotitumira yako data rako pachako, nekudaro uchisimbisa mvumo yako mukugadziriswa kwavo.
Zvinoenderana nezvakapihwa neFederal Law No. 152-FZ yaChikumi 27.06.2006, XNUMX "Pamunhu Dhata", anoshanda anosungirwa kutora matanho ese ehurongwa uye ehunyanzvi kuona kuchengetedza kwedata revashandisi kubva kuzviito zvisiri pamutemo kana kuwana netsaona kwavari, pamwe nezviito zvinosanganisira kuparara, kugadzirisa, kuvharira, kuteedzera, kugovera dhata remunhu. Zvimwe zviito zvinokodzera kunge zvisiri pamutemo.
Internet zviwanikwa (saiti) yakaoma yekutsanangurwa kwemavara, graphic element, dhizaini yezvinhu, mifananidzo, makodhi echirongwa, foto uye vhidhiyo zvinhu, pamwe nezvimwe zvinhu zvakakosha pakuita kwayo kunoshanda. Kero yedu: cgreality.ru
Pasi peSite Administration zvinoreva vanhu vari vashandi veAAAA ADVISER LLC vane mvumo yekuitarisira.
Пользователь - mushanyi wesaiti akapinda muSiti, uyo akagamuchira mamiriro emvumo iri mubvunzo, zvisinei nekuti akapasa kunyoreswa here, nzira yemvumo kana kwete.
Under Yekuchengetedza dhata yemunhu zvinoreva seti yemaitiro anotendera kutevedzera zvinodiwa nemitemo yeRussian Federation maererano nekuchengetedza, kugadzirisa, kuchengetedza uye kuendesa yega data revashanyi.
Ndeapi data evashanyi anogadziriswa pavanoshanyira saiti:
Dhata repasipoti yemushanyi (zita rizere);
Email yevaenzi kana IP kero;
Nekutambira mazwi echibvumirano chakataurwa, Mushanyi anosimbisa mvumo yake yekutora matanho ane chekuita nekugadziriswa kwedata rake.
Kugadziriswa kweiyo data iri mubvunzo zvinoreva zviito zvinotevera:
kujekesa (kugadzirisa, shanduko)
kufambisa (kugovera, kupihwa kwekuwana)
kuparadzwa kwemunhu data.
Kuti uzadzise zvisungo zvakapihwa nepamusoro Federal Mutemo uye akakodzera mutemo mutemo zviito, saiti manejimendi iri kutora matanho ese anodiwa. Uye zvakare, manejimendi saiti, zvinoenderana nemutemo wezvematongerwo enyika uri pamusoro, ine kodzero yekuzvimiririra kuona kuumbwa uye rondedzero yezviyero zvinodiwa uye zvakakwana kuitira kuona kuzadzikiswa kwemabasa akakodzera
Chibvumirano chakataurwa chinoshanda kudzamara mushandisi wenzvimbo yacho aidzora. Kudzoserwa kunoitwa kuburikidza nekutumira kunyorerana kunyorerana kunyorerwo netsamba yakanyoreswa kana kuendesa kumumiriri wemutemo wekambani kupokana nekugamuchira.
Mushure mekutambira chikumbiro chakanyorwa chekubvisa ichi chibvumirano pakugadziriswa kwemunhu data, iyo saiti cgreality.ru inosungirwa kumira kuitisa uye kusabvisa Dhata remunhu kubva kudhatabhesi.